Nin Loo Haysto inuu "Jabsaday" Twitter-ka Trump
Saturday November 21, 2020 - 09:31:29 in Wararka by Burco Office 2
Booliska Netherlands ayaa su'aalo weydiiyay cilmi-baare ammaanka internet-ka ah oo sheegay inuu ku guulaystay gelidda cinwaanka uu Twitter ku leeyahay Madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, kadib markii uu ku nasiibsaday lambarka sirta ah.
Victor Gevers ayaa bishii hore shaaciyay inuu galay cinwaanka Trump ee Twitter isagoo isticmaalay lambarka sirta ah ee "MAGA2020!".
Balse Gevers ayaa sheegay inuu hayo xog dheeraad ah oo uu ku xaqiijinayo sheegashadiisa. Ma uusan shaacin waxa ay tahay xogtaas, balse qofka marka uu galo cinwaanka Twitter-ka qof kale waxa uu:
Arki karaa, diri karaa farriimaha khaaska ah
Arki karaa qoraallada iyo dadka uu sida gaarka ah u keydsaday xogtooda
Heli karaa macluumaad ay kamid yihiin inta qof ee uu iska xayiray ama uu block saaray.
Afhayeen u hadlay xafiiska dacwad-oogga Netherlands ayaa xaqiijiyay inay su'aalo weydiiyeen khabiirka, balse aanay wax codsi ah uga iman dhanka Maraykanka.
Gevers ayaa weriyayaasha u sheegay in 22-kii October uu "jabsaday" cinwaanka Trump uu ku leeyahay Twitter, waxaana warkan markii u horreysay tebiyay warbaahinta Vrij Nederland.
Khabiirkan ayaa sheegay in maalmo dhan uu ku dedaalayay sidii uu ku heli lahaa dadka ololaha u qaabilsan Trump si uu uga digo "dayaca" hasta cinwaanka Madaxweynaha, balse aanu ku guulaysan arinkaas.